आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै रजतपटलाई गरिमाको चेतावनी « Drishti News – Nepalese News Portal
आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै रजतपटलाई गरिमाको चेतावनी
२५ असार २०७८, शुक्रबार १ : ५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कलाकार गरिमा शर्माले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै टेलिभिजिन कार्यक्रम रजतपटमाथि आपत्ति जनाएकी छन् । उनले ती कार्यक्रम र प्रस्तोताविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने समते चेतावनी दिएकी छन् ।
कलाकार शर्मा गायक दुर्गेश थापासँग टिकटक लाइभमा आएपछि चर्चामा आएकी थिइन् । गरिमा र दुर्गेशबीच भएको कुराकानीको एउटा क्लिप्स सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । उक्त क्लिप्समा दुर्गेश र गरिमाको संवाद सुन्दा उनीहरुबीच लामो प्रेम सम्वन्ध भर्खरै टुटेको आभाष हुन्छ । जुन उनीहरुबीच एउटा गेम थियो । यसैलाई अहिले गरिमालाई तनाव दिएको छ ।
उक्त क्लिप्सलाई लिएर टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटले समाचार बनाएपछि गरिमा रुष्ट बनेकी हुन् । शर्माले उक्त समाचारले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो तरित्र हत्या गर्ने रजतपट कार्यक्रम र प्रस्तोताविरुद्ध कानूनी कारवाहीमा जाने चेतावनी दिएकी छन् ।
रजतपट कार्यक्रममा चरित्रहत्या गरिएकोप्रति गम्भिर आपत्ती!
सम्पुर्णमा नमस्कार,म गरिमा शर्मा । केहि समयदेखि नेपाली कलाकारीतामा छु । यो क्षत्रमा रहँदा सकेसम्म विवादमा नफस्ने कोशिस गर्दा गर्दैपनि जबरजस्ती विवादमा तानिन्छ ।
यसै सन्दर्भमाहिजो अर्थात् असार २४ गते साँझ एपिवान टेलिभिजन र रजतपट अनलाइन युट्युब च्यानलबाट प्रसारित कार्यक्रम रजतपटमा मेरो बिषयमा निर्माण गरिएको अतिरञ्जित र भ्रमपूर्ण टेलिभिजन रिपोर्टप्रति गम्भिर आपत्ती प्रकट गर्दछु ।
यसखालको भ्रामक र बदनियतपुर्ण खवरलाइ विश्वास नगरिदिनुहुन म आम् दर्शक र शुभेच्छुकहरुमा अपिल गर्दछु ! साथै यस अन्यायका विरुद्धमा बुलन्द आवाज बोलीदिनुहुन सबैमा अनुरोध गर्छु । यहाँहरुको अनवरत माया र सद्भावका निम्ति सदैव आभारी छु ।
गरिमा शर्मा २०७८-०३-२५